Gadzira Zvinangwa Usati Wepamhepo App | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 8, 2011 Chipiri, Gunyana 4, 2012 Douglas Karr
Ivo vanhu vakanaka paWebtrends (mutengi) vaburitsa irinoshamisa pepa kubva kuna Director wavo weMobile Analytics, Eric Rickson. Kugadzira Strategic yeMobile Kukura uye Investment inofamba kuburikidza neakakosha mashandiro ekuratidzira mune nhare mbozha. Kunze kwenyaya yenharembozha analytics, imwe yedzakakosha ndima yandakawana yaive:
Kazhinji kazhinji, vatengesi vanosvetuka nhanho yakakosha yekutsanangura uye kuronga yemaoko yemusika musika, vakananga kunangidziro yekushandisa pachinzvimbo. Vazhinji vanopinda munhandare nhare neApple app, vayambuke minwe, uye vanotarisira kuti ichabudirira. Vamwe vanoburitsa nharembozha kune ese makuru mapuratifomu uye vanotarisira kuti imwe inobata. Kazhinji makambani anoburitsa Anwendung uye vozoshandisa zviwanikwa zvavo kuzvichengeta. Uye vamwe vanosarudza kutarisa pawebhu nhare nekuti vanotenda kuti maapplication achaenda nenzira yedinosaur.
Tanga tichinyora zvakawanda nezvazvo Mobile Marketing pano paMartech. Senge svikiro, ndeimwe yekukurumidza kukura asi isingateedzerwe. Makambani ari kurwisa nhare ari kukohwa mabhenefiti, zvakadaro. Retailer eBay yakawanikwa zvinodarika $ 2.5 bhiriyoni mukutengesa kuburikidza nharembozha muna 2010 uye inotarisira kupeta iyo mari muna 2011.
Ive neshuwa yekuburitsa iyi whitepaper yekutora-kwakadzika kutungamira pane metric iyo vashambadzi vanogona kushandisa kuongorora uye kugadzirisa yavo nhare mbozha. Nemapurogiramu anopfuura mazana mana nemazana mashanu ezviuru kunze uko, zviri nyore kurasika musanganiswa. Kugadzira zano renhare - uye kurwisa chikuva izano riri nani pane kurasa toni yemari mukugadzira chirongwa chisina kana munhu anoda, anoda, kana asingape rubatsiro kune rako repazasi mutsara.
Tags: Mobile mafomuMobile Apps
Aug 12, 2011 na11: 31 PM
Ndatenda, Douglas nezano pamusoro pepepa raEric Rickson… inonakidza kuverenga. Semunhu anovandudza nharembozha, ndinonyanya kufarira kufungidzirwa kweStanley Research nezvevashandisi veinternet vanopfuura vashandisi vepa desktop na2014.
Hameno kuti mangani maapplication achave achiwanikwa panguva iyoyo?
Oo, uye chitaurwa chako chema450,000 maappu anga ari eApple's App Store - pane zvimwe zvakawanda zviripo (munguva pfupi iri kuzopfuura Apple!) Muchitoro cheGoogle, chitoro cheAmazon, pamwe neiya yeRIM, Microsoft, nezvimwe.
Aug 16, 2011 na10: 28 PM
Wanyatsoita chokwadi re: app kuverenga! Ndatenda!